Ukulethwa kwezimbali - njalo kukhululekile eMoscow
Ngemuva kokuthi i-oda selibekiwe kusayithi, imininingwane emayelana nalokhu iya kwinsizakalo yokulethwa kwesitolo noma isazi sezimbali esizimele osikhethile. Ungaqapha ukuthi iyiphi i-oda lakho elisebenzisa idatha eku-akhawunti yakho kuwebhusayithi.
Ukulethwa eMoscow mahhala (ngaphakathi kwemingcele yedolobha). Ukulethwa nakho kumahhala uma kungadluli kulowo ozungezayo. Uma umamukeli we-bouquet engekho eMoscow, izindleko zensizakalo zibekwa isitolo sezimbali noma ngqo yi-florist futhi zibalwa ngokuzenzakalela ngokuya ngenani lamakhilomitha ukusuka kozungezayo okushiwo kwifomu loku-oda. Kuzoncika ebangeni, ngokulandelana.
Isikhathi okuzothunyelwa kuso isixha sincike ebunzimeni bomsebenzi nesimo sesiminyaminya. Incazelo yezimpahla esizeni ibonisa ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuletha lesi sixha eMoscow. Ngemuva kokufaka i-oda lakho, uzothola i-SMS esho ukuthi i-oda lamukelwe. Futhi-ke - ukuthi i-oda lilethwe, futhi ungabona futhi isithombe sezimbali ezithunyelwe kanye nesithombe somamukeli, uma umuntu obhalisiwe engazange anqabe ukuthatha isithombe nezimbali.
Izibuyekezo mayelana nokucwala
Abanikazi abajabulayo bezimbali
Ingobo yomlando yezimbali